Guddig doorashooyinka Soomaaliland”Majiraan wax is dabamarin – Radio Muqdisho
Waxaa weli soconaya tirinta codadka doorashadii Soomaaliland,iyadoo laga filayo guddiga in dhawaan uu soo saaro natiijadii rasmiga ahayd ee doorashada.
C/qaadir Iimaan Warsame oo ah Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Somaliland ayaa beeniyay wararka sheegaya Doorashadii Isniintii ka dhacday Somaliland in ay noqotay mid lagu shubtay.
Guddoomiye C/qaadir Wuxuu sidoo kale sheegay in ay qalad tahay dadka qaar in ay baraha bulshada soo dhigaan in ku shubasho ay dhacday, wuxuuna tilmaamay muhiim in ay tahay natiijada in looga dambeeyo Guddiga Doorashada.
Guddiga doorashooyinka ayaa xusay in ay diyaar u yihiin qancinta xisbi kasta oo wax ka tabanaya habka tirinta iyo qaab doorasheedka,balse ku baaqey in laga fogaado wararka been abuurka ah.
Mas’uuliyiintani ayaa ka dalbaday shacabka Soomaaliland in ay is dejiyaan islamarkaan ka dhursugaan guddiga ilaa uu soo saaro natiijada rasmiga ah ee doorashadaasi.